Naoty karaibiàna nataon’i Hokkaido · Global Voices teny Malagasy
Fitsangantsanganana sy taokanton'ny "Avelao ho avy izay ho avy aminao"
Voadika ny 30 Jona 2021 18:33 GMT
Ao anatin'ny tanàna kely iray any amin'ny nosy farany avaratra ao Hokkaido, firy ny vintana mety hitontonanao amina Japoney iray miteny espaniôla, miaina sy miasa any amin'ny Repoblika Dominikàna nandritra ny 47 taona, ary ankehitriny manafatra ny voan-kafe tsara indrindra mety ho hitanao any Azia??
Mba hisokafana amin'ny “tsy nampoizina” rehefa hitranga izay hitranga, ny fiainana dia vokatra nateraky ny tranga maro mifangaroharo tsy misy isafidianana.
Voaasa kisendrasendra mba handeha sambo mandritra ny 24 ora hanatitra fiara mpanao ‘rallye’ tany Hokkaido dia nanapaka hevitra ny namanao ny handeha hilasy samirery ary hamandrika ho anao ny fivahiniana any amina tokantrano iray mpampiantrano vahiny, tsy misy birao fanoratana, tao amin'ny tanàna iray izay tsy mbola renareo mihitsy hatrizay. Tsy eo ny tompontrano amin'ny fotoana ahatongavanao. Sosokevitr'ilay namanao ny handeha hiandry any amin'izay toerana fisotroana kafe akaiky indrindra, sarotra tadiavina ilay toerana saingy vonona ny tsy hamela anao ho irery eny an'arabe izy ka dia hitany ihany.
Manafatra kafe ianao. Voalohany, gaga ianao fa ilay toerana dia any afovoan'ny tsy fantampantatra any, tsy misy lisitr'izay azo hanina (menu), manana karazana voan-kafe efatra, nendasina tamina hafanana tsy mitovy. Saingy feno zavatra hafahafa i Japana ka dia ny kafenao no sotroinao dia miandry ny fotoana handalo. Avy eo, manomboka voamarikao ny sarin'ireo toerana any lavitra any ary dia miezaka mamantatra ny momba azy ireny ianao. Avy any Haiti. Mbola tsy mahazatra ihany koa. Be loatra ireo fifanandrifian-javatra ka taitra ny fahaliananao.
Sady mamaly ireo fanontanianao ilay tompon'ny toerana no manala ny vovoka amin'ireo harona roa feno sary. Heverinao fa efa zavatra fanaony isaky ny Sabotsy maraina ilay izy, saingy tsy izay.
Alohan'ny hahatongavan'ny sainao momba izay miseho, raisiny am-pahamalinana ireo sary ary hazavainy aminao, amin'ny teny espaniola tsy miahankahana, ny fomba nandefasana indray ho any ivelany ireo miaramila japoney niverena nody taorian'ny Ady Lehibe Faharoa satria tsy ampy ho an'ny rehetra ny asa. Natomboky ny goverenamanta ny fandefasana azy ireny ho any amina toerana izay tsy hitany ho apetraka akory ao anaty sarintany, tanaty fepetra tena ratsy dia ratsy tsy takatry ny sain-dry zareo. Nandeha tany amin'ny Repoblika Dominikàna izy teo amin'ny faha-19 taonany, fony io firenena io mbola teo ambany jadon'i Trujillo. Tsy nisy fotodrafitrasa fandraisana tany, tsy nisy rafitra hanohanana azy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana, betsaka ireo Japoney nandeha niaraka taminy no nanao fitakiana mba ho afindra toerana ka nalefa tany Brezila. Kanefa, tamin'izay fotoana izay, nodimandry i Trujillo ary dia tsapany fa niova ny rivotra niainana. Nandrisika azy ny fiovàna ara-pôlitika, nanomboka ny asa fandraharahàna ara-barotra azy manokana izy: legioma, avy eo TV, fantsona TV sy kafe, izay mbola tantaniny hatramin'izao.
Nandritra ny taona maro nifandimby, vavolombelon'ireo fifanarahana marobe izy, nifampiraharaha tamin'ny governemanta japoney, ny Banky Iraisampirenena, ary efa nahazo loka nasiônaly maro noho ny fampiroboroboana ny firenena, izay samy voarakitra sy tsarovan'ireo sary nomerika anaty pejy A4, ary ny sasany anaty bokikely izay izy ihany no namokatra azy. Nanambady vehivavy japoney ihany koa izy ary nijanona tany no niafarany hatramin'ny 2000, fony izy niverina tao Hokkaido sy nanokatra ny “mi casa”. Azo atao mora foana hoe tranombakoka ilay toerana, rehefa jerena ireo fahatsiarovana rehetra vaotahiry etsy sy eroa ary ireo sary tsara tarehy mihantona eny rehetra eny. Angatahan-dry zareo ireo mpanjifa mba hitondra ny biskoitrany sy ny sakafony manokana. Ny atolotr'izy ireo ao amin'ny “mi casa” dia kafe, voany manana ny lanja sy ny tantara. Vitan-dry zareo ihany koa ny manao izay hampiasàn'ilay mpanao sôkôla malaza ny voan-kafe avy ao aminy mba hamokarana boatin-tsôkôla tsy misy fangaro afa-tsy kafe izay amidin-dry zareo amim-pireharehana ao amin'ny toerana fivarotany kafe.
Marobe ireo sary avy any Karaiba nasehony ary tsapako ho malahelo ny fitsangantsanganako (anaty ala) aho. Azo lazaina ho OK ihany ilay mivenjivenjy eny amin'ny manodidina, iray amin'ireo tsara vintana aho, tsy mba nihiboka an-trano ary nanana fahalalahana nivenjivenjy nanerana ireo firenena ka tsy afaka ny hitaraina. Fa malahelo ny fandehanana any amin'ireo toerana haolo, izay tsy azonao veroka akory ny fisiany, fitaingenana an'ireo fiaramanidina tranainy no sady manontany tena raha ho tafapetraka amin'ny toerana tokony hipetrahana na ho tody hatrany am-paran'ny dia (kidaladala ilay izy saingy eny, malahelo an'izany koa aho) ary ny fahatsapana fa very, ary indraindray manirery saingy velona eny anivon'ireo olon-tsy fantatra tanteraka. Malahelo ny fanaovako auto-stop an'ireny fiarabe mpitatitra sakafo ireny mba hahafahana mitahiry ny 5 dolara keliko, na miafara amin'ny fanaovana zavatra tena samihafa tanteraka amin'izay efa niomananao hatao satria tamin'ny kisendrasendra ianao dia nifanena atamin'ny olona mahafinaritra teny an-dàlana teny ary dia namerina nandinika ny zotra ho arahanao.
Mitohy mahatsapa aho, angamba aza bebe kokoa, kazarana tànana tsy hita maso mamindra ahy etsy sy eroa ary manosoka hevitra amiko momba izay ho atao manaraka. Zavatra marobe nitranga hatramin'ny nahatongavako teto Japàna no tsy vitako hazavaina amin'ny fomba manaraka ny lalantsaina. Nisy zavatra nanosika ahy hifindra amina toerana iray vaovao tao Kyoto. Tany aho dia nifanena tamin'ireo olona vaovao nanaiky handray ahy miaraka amin'ilay fiteny japone-ko tsy dia mamely, ary nanasa ahy tao Hokkaido, teo ireo fifandrifian-javatra nifanesisesy, tonga tany amin'ny iray amin'ireo toerana tena manankarena ara-tantara tao amin'io tanàna io aho.
Farany dia nisoratra anarana aho ary nandeha naka ny Sushi-ko. Betsaka ny tolokevitra naroson'ny findaiko fa izay hintsin'ny oroko ihany no narahiko nony farany ka tsy ankifidy, niditra tamin'ny toerana iray aho. Izaho irery no mpanjifa tao ka dia nanana fotoana niresahana ny tompontrano. An-taona maro izy no nipetraka tao Tokyo, nianatra ny kanton'ny Sushi talohan'ny niverenany tany amin'ny toerana nahaterahany mba hanokatra ny toeram-pivarotana sushi keliny (sady matsiro). Noresahany ny sakafo, ny ‘oursins’ ary ireo fikarakaràna sakafo mananosarotra toy ny “acqua pazza”, dia hitako fa fantany tsara ilay namako “vaovao valovotaka tany amin'ny Repoblika Dominikàna”.
Mitohy mandeha ihany ny zavatra rehetra. Ny sasany mitondra hafaliana ho anao, ny sasany mitondra alahelo, saingy ny hadisoana gaovana dia angamba ny fitadiavana ny hevitra ankapoben'izay zava-mitranga ankehitriny, toy ny hoe ny dikan'izao rehetra izao dia tsy maintsy aboraka aminao “dieny izao ary eto”. Ankehitriny dia misy dikany ny zavatra sasany, ny sasany tsy hisy dikany raha tsy afaka andro vitsivitsy, herinandro, volana ary, araka ny voalazan'i Dalai Lama, “indraindray ny tsy fahazoanao izay nirianao no fanomezana tsara indrindra azon'ny fiainana atolotra ho anao”.
3 andro izayAngletera